बैद्यखानाको च्यावनप्रास बजारमा अभाव « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७७, १३ पुष सोमबार ११:४६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । कोभिड १९ को रोकथामका उपाय तथा व्यवस्थापनका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्वन्धि निर्देशीकामा भनिएको छ, ‘च्यावनप्रास एक ठुलो चम्चा (१० ग्राम) विहानखाली पेटमा सेवनगर्ने ।’ तर,नेपालमा एकमात्र आयुर्वेद औषधी उत्पादन गर्ने सरकारी निकाय सिंहदरबार वैद्यखानाले अझै बजारमा उत्पादीत च्यावनप्रास पुरयाउन सकेको छैन ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका प्रवन्ध निर्देशक डा. बंशदिप शर्मा खरेलले च्यावनप्रासका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ अझै तयार भइनसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, छिप्पीएको आलो ताजा अमलाबाट च्यावनप्रास उत्पादन हुन्छ । अमला सिजनल उत्पादन हो । कच्चापदार्थ प्राप्ती भएपछि लगत्तै उत्पादन कार्य सुरु हुन्छ । दशै अघिसम्म वैद्यखानाले उत्पादन गरेको च्यावनप्रास बजारमा प्रशस्त पाइन्थ्यो । ’ उहाँले वर्षेनी १५ हजार केजिको च्यावनप्रास उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो । यो वर्ष कोभिड १९ का कारण पनि च्यावनप्रासको माग विगतभन्दा बढेको डा. खरेलको भनाई छ । उत्पादन भएको च्यावनप्रास सबै खपत भएको बैद्यखाना बताउँछ ।
वैद्यखानाको च्यवनप्रास, शीलाजित र तुलसी चिया उपभोक्तामा निकै लोकप्रिय छन् । शासक र भाइ–भारदारको उपचार गराउने उद्देश्यले प्रतापमल्लको समयमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्धेश्यले स्थापना गरीएको हो सिंहदरबार वैद्यखाना ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका अध्यक्ष डा.बाबुराजा अमात्यका अनुसार हाल बजारमा च्यावनप्रास र सिलाजितको माग बढेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कच्चापदार्थ अझै तयार भएको छैन । तयार हुना साथ बजारमा विक्री गर्छौ । च्यावनप्रासको माग बढेको यथार्थ हो । ’
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजारको माग अनुसार वैद्यखानाले आयुर्वेदिक जडीबुटीको चुर्ण उत्पादन गरे पनि बजारमा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । अन्यत्र भन्दा वैद्यखानामा औषधि सस्तो पर्ने भएकाले माग बढेको हुन सक्छ । ’ उहाँले औषधि निर्माणको क्षेमतालाई बृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपि मापदण्डमा रहेर औषधिनिर्माण गर्ने र वैद्यखानालाई प्रदेश संरचनामा लैजाने तयारी भइरहेको उहाँको भनाई छ । डा.अमात्याकाअनुसार बैद्यखानाले उत्पादन गरेका औषधिहरु विदेशमा समेत विक्री गर्ने तयारी छ ।
कुनै समय आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा निकै परिचित थियो वैद्यखाना । तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याएको सिंहदरबार वैद्यखाना २०५१ सालदेखि विकास समितिमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको थियो । आयुर्वेदिक उपचारमा एकछत्र राज गर्न सफल र निकै परिचित वैद्यखानाको व्यवस्थापन पक्ष २०६९ सम्म सबल नै थियो ।
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । बेलायतमा कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि विश्वको पहिलो एन्टिभाइरल ट्याब्लेट स्वीकृत भएको